Etu esi ebudata ngwa site na Storelọ Ahịa Play n'enweghị akaụntụ Google | Gam akporosis
Etu esi ebudata ngwa site na Storelọ Ahịa Play n'enweghị akaụntụ Google
Nke a bụ ihe na - eme na sistemụ niile na - arụ ọrụ, mana ikekwe anyị ga - achọ ka ọ ghara ịdị otu a. O yikarịrị ka ị zụtala gam akporo ngwaọrụ, ị gara ibudata WhatsApp, iji nye ihe atụ nke otu n'ime ngwa ndị kachasị ewu ewu, ma ị chọpụtala na ị nweghị ike ọ gwụla ma ị mepụtara ma ọ bụ tinye akaụntụ. Ị chọrọ ibudata ngwa na-enweghị iji akaụntụ Google? Nọgide na-agụ ihe.
Ihe akowara na obere nkuzi a agaghi akowa ihe obula di egwu. Nke ahụ bụ, anyị niile maara na enwere ụlọ ahịa ngwa ahịa ndị ọzọ nke na-enweghị nchekwa (ọ bụrụ na ha nwere ya) dịka Playlọ Ahịa Google Play, ụlọ ahịa ngwa ngwa gam akporo. Ihe dị mma banyere aghụghọ a bụ na anyị ga-ebudata ngwa ahụ na ụlọ ọrụ gọọmentị, nke ga - enyere anyị aka ịwụnye APK nke, na tiori, ka Google tụlerela ya wee nwee ike ịnụ ụtọ ngwa nke Google Play n'efu na anyị na-ebipụta kwa ụbọchị. N'okpuru ị kọwara usoro ndị ị ga-eso.
1 Nzọụkwụ ịgbaso ibudata ngwa site na Google Play na-enweghị akaụntụ
2 Usoro a ọ dị mma?
3 Kedu uru anyị na-erite site na iji usoro a?
Nzọụkwụ ịgbaso ibudata ngwa site na Google Play na-enweghị akaụntụ
El ihe atụ anyị ga-eji n'ihi na a nkuzi ọ ga-abụ ngwa izipu ozi WhatsApp. Amaara m na e nwere ndị ka mma, mana WhatsApp bụ otu n'ime ngwa ndị kachasị ewu ewu na ikpo okwu ọ bụla, yabụ ọ dị m ka ọ bụghị nhọrọ ọjọọ.
Anyị na-emeghe ihe nchọgharị weebụ ọ bụla nke na-enye anyị ohere ibudata faịlụ.
Anyị na-aga Playlọ Ahịa Google ma chọọ ngwa anyị chọrọ ịwụnye. O yikarịrị ka site na smartphone ma ọ bụ mbadamba ihe anyị na-achọ apụtaghị, yabụ ezi echiche ga-achọ ngwa ahụ site na ịchọ Google. N'ihe atụ WhatsApp, achọrọ m maka "whatsapp google play".
Ozugbo anyị nwetara peeji echichi nke ngwa ahụ, anyị na-ele anya na URL mmanya ma detuo ihe dị n'azụ akara nha anya (=). N'ihe banyere WhatsApp, ihe anyị nwere idetuo bụ «com.whatsapp & hl= bụ".
Ugbu a, anyị na-aga APK Downloader ibe weebụ, dị site na EGO.
Na igbe okwu, anyị na-ede ihe anyị depụtaghachiri na nzọụkwụ 3.
Ọzọ, anyị na-emetụ «n'ịwa download njikọ".
Nzọụkwụ ọzọ bụ pịa bọtịnụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ebe ọ na-ekwu «Pịa Ebe a na download CODE_DE_LA_APP ugbu a«, Ebee« CODE_DE_LA_APP »ga-abụ ID nke ngwa anyị chọrọ ịwụnye. Nbudata ahụ ga-amalite.
Ozugbo ebudatara nbudata ahụ, anyị na-achọ faịlụ ebudatara. Ọnọdụ ya ga-adabere na ihe nchọgharị anyị ji ibudata ngwa nke ngwa ahụ. N'ihe banyere Firefox, nbudata ndị ahụ dị na bọtịnụ nhọrọ (ntụpọ atọ) / Ngwaọrụ.
Anyị na-agba ọsọ APK ịmalite nwụnye.
N'ikpeazụ, anyị na-agbaso usoro ahụ dị ka mgbe anyị wụnye ngwa ọ bụla.
Usoro a ọ dị mma?
Kpamkpam nchekwa. Dị ka anyị kọwara na mbụ, usoro iji wụnye ngwa sitere na Google Play na-enweghị akaụntụ na-akpọ aha aha na ụlọ ọrụ ngwa ngwa gam akporo. A na-enweta APK ndị ebudatara site na iji sistemụ a site na Google Play, yabụ anyị nwere ike ikwu na ịwụnye ha na sistemụ a abụghị nke na-erughị ala karịa ime ya site na ụlọ ahịa ngwa ọrụ.
N'ezie, na usoro ndị dị na nkuzi a, ekwughi m ihe nwere ike ịdị mkpa: ọ bụ Ọ dị mkpa na anyị ga-ahapụ ka echichi nke amaghi isi mmalite iji wụnye ebudatara APKs. Ọ bụrụ na anyị na-ahapụ ya oge niile, anyị agaghị ahụ ịdọ aka na ntị ọ bụla, mana ọ bụrụ na anyị enweghị ya, ọ ga-agwa anyị na ya enweghị ike iwunye ngwa ahụ maka ihe nchekwa.
Ihe mere anyị ji ahụ ọkwa a dị mfe: ọ bụ ezie na APK sitere na Google Play, naanị ihe ngwaọrụ gam akporo anyị maara bụ na ebudatara na ịntanetị, yabụ ọ ga-adọ anyị aka na ntị na enwere ike gbanwee ya iji tinye koodu ọjọọ. Ma m na-ekpeghachi otu ugboro ọzọ, Ngwa ndị ebudatara na usoro a dị mma dịka ndị ebudatara na ụlọ ahịa gọọmentị nke gam akporo.
Kedu uru anyị na-erite site na iji usoro a?
Ọfọn, ihe niile ga-adabere. Ọtụtụ ndị ọrụ na-echegbu onwe anyị banyere nzuzo anyị. Amaara m ndị na-enweghị mmasị ịrụ ọrụ maka "GAFA" (Google, Apple, Facebook na Amazon) na ha na-ahọrọ ịgwa ụlọ ọrụ ndị a ihe, etu na mgbe ha jiri ihe. N'otu aka, iji usoro a na - eme ka ọ sikwuoro Google ike ịmata ngwa ndị anyị jiri na ngwaọrụ iOS anyị. Ama m na ha anọghị n’ọtụtụ, mana enwere ike ịghọta ha.
N'aka nke ọzọ, usoro a na-egosikwa maka ndị na-anaghị eji ọrụ Google. Kedu ihe kpatara ịmepụta akaụntụ ọ bụrụ na ndị ọrụ a niile chọrọ ka ibudata ngwa? Ikekwe ibudata ngwa site na Google Play na-enweghị akaụntụ adịghị mfe dịka ịme ya site na ụlọ ahịa ngwa ngwa, mana agaghị m emepụta ya n'onwe m naanị maka nke a.
Nkuzi nkuzi a ọ nyere aka?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Etu esi ebudata ngwa site na Storelọ Ahịa Play n'enweghị akaụntụ Google
Gbalịa na nbudata na play ụlọ ahịa si a pụrụ ịdabere na weebụsaịtị, zere kpọmkwem downloads si mediafire na nkwekọrịta. E ị ga-enwe gị emelitere Play Store ụdị.
Zaghachi Angel Luis
Enwere m mmasị na ihe ha na-ebipụta, ya bụ, ha bụ egwuregwu mara mma, ụdị appssss niile !!!!!!!!: - *: - *: - *: - * Ọfọn, m tinye aha, emesịa email wee web ... .. N'ikpeazụ, edere m okwu na pppuuufffff ihe ndị ọzọ kwuru pụtara na m na-anwale ihe niile kwuru kwuru ma ugbu a enwere m ike ibudata egwuregwu na-enweghị ụlọ ahịa egwu: - *: - *: - *: - *: - *: - * : - *: - *: - *
Zaghachi ka Cele
Site na mmeghe mgbe m na-ebudata ngwa m tinyere pdf site na ndudue ugbu a ngwa ọ bụla nke na-aga n'okpuru na-aga ebe ahụ ma amaghị m otu esi edozi ya, onye nwere obiọma nyere m aka ịchọta azịza ya…. Daalụ maka itinye uche gị.
Zaghachi daniel lopez beltran
Ọ na-enyere m aka nke ukwuu. Enwere m ike ibudata ngwa na-agwa m na ha adịghị maka mba m. Daalụ nke ukwuu! Maka nke a na maka ihe niile. Androidsis na-amasị m.
Agbalịrị m ibudata droidcam, mana enyeghị m ngwa ngwa ahụ, o nyere m ozi: ị na-enwe oke oke, biko gbalịa oge elekere 1 ọzọ.
Kedu otu Google si dị umengwụ. Ewezuga oge ọ bụla m metụrụ ihe dị mkpa na sistemu nke ihe ọ bụla ọ bụ aka, ana m etinye awa abụọ ka ọ rụọ ọrụ ọzọ. Ma ọ dịghị anọgide otu.
Mana achọghị m iji Google ma ọlị. Enwere m nsogbu nke ukwuu: ọ bụrụ na ịgbanyeghị nke a, nke ahụ anaghị arụ ọrụ na otu puku ugboro
Esi igbachi gị gam akporo n'enweghị ihe na-mgbochi nwa mkpọchi